I-Apple izakuqala ukuvavanya iiglasi zokwenyani eziNgezelelweyo | IPhone iindaba
I-Apple izakuqala ukuvavanya iiglasi zokwenyani ezingathandekiyo
U-Apple sele eyicacisile into ayicingayo malunga neNyaniso eyiyo, kwaye iinjongo zayo zexesha elifutshane neliphakathi azibandakanyi ukuphuhlisa olu hlobo lwetekhnoloji, kodwa into eyahluke mpela yeyokwenyani. Ukuzihlula kwilizwe elingelolakho akubonakali ngathi kunesicelo esithe kratya ngaphandle kwemakethi yemidlalo yevidiyo, kodwa ukutyebisa inyani esiyibonayo ngolwazi olufanelekileyo kwizicwangciso zenkampani, kwaye enyanisweni, njengoko kuchaziwe yiBloomberg, iya kuba sele iqala ukuvavanya izixhobo zokuqala: Iiglasi zokwenyani ezingathandekiyo, ezifanayo kwiGlasi kaGoogle esele ilibalekile.
Inkampani ngesele ibacelile abanye abathengisi ngamalungu ukuba enze iiyunithi zovavanyo ezimbalwa. Sithetha ngamanani amancinci ezikrini ezihlengahlengisiweyo ukuze zikufutshane neliso kunye nezinye izinto zezo glasi, kodwa kungaze kubekho ubungakanani obaneleyo bokurhanela imveliso ngobuninzi kwangoko kwintengiso, kodwa endaweni yoko baya kuvumela kuphela ukwenza iiyunithi ezimbalwa ukuqala iimvavanyo zezi zinto zintsha «zinxitywayo». Kolu lwazi kufuneka kongezwe ukuthengwa kweenkampani ezahlukeneyo ezinxulumene nale teknoloji, kwaye isiphumo siya kuba ngumdla ocacileyo yi-Apple ekuphuhliseni isixhobo kwixesha eliphakathi.
Umbuzo onyanzelekileyo uza kuba ngowokuba "Yintoni eye yabonwa nguApple kwiiglasi zenyani emva kokuba uGoogle eyirholile iprojekthi?" Iglasi kaGoogle, evelise uchulumanco olukhulu kwinkcazo-ntetho yayo kwaye ngawaphi amaphepha kunye namaphepha abhalwe kwiiblogi kunye nezinye iindaba ezikhethekileyo, ezingcwatywa nguGoogle. Kubonakala ngathi iingxaki kuyilo lwayo, ngokuzimela kwayo kwaye ngakumbi amathandabuzo malunga nemfihlo abayenzileyo ibisisiseko ekushiyekeni kweprojekthi.. Uyilo kunye nemfihlo akufuneki kube yingxaki kwiApple, eya kuthi iphucule ukuzimela kwezi glasi ukufezekisa imveliso eyimpumelelo kwintengiso. Kuya kufuneka silinde ubuncinci kude kube yi-2018 ukubona into izaliseka, ukuba iya kuba yinto enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple izakuqala ukuvavanya iiglasi zokwenyani ezingathandekiyo
IPiano Tutor ye-iPad yasimahla ngexesha elilinganiselweyo
Ukhuphiswano lweApple Music luyonyuka kugqatso lokungahlali eSpotify